gd. post. but.. that time will be shown destroyed in that place and , syargyi feeling when he saw his shool.
ဒီလို ဝထ္တုလေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ပိုအရသာရှိတယ်… ငယ်ငယ်က ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွေ လွမ်းမိတယ်… ဦးထွန်းလှအောင်လို ဆရာကြီးတွေ အတော်ရှားသွားပြီ…
အဖြူအစိမ်း ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်လွမ်းမိပါတယ်
Jun 11, 2008, 4:18:00 AM
အတိတ်က ကျောင်းတော် ကြီးနဲ့ နာသုံးနာခံကာ ပညာသင်ကြားပေးတဲ့ လေးစားထိုက်သော ဆရာ၊မ တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ် တွေကို ဝယ်လို့ရရင် ပြန်ဝယ်လိုက်ချင်ပါရဲ့။
Jun 11, 2008, 8:20:00 PM
ကျောင်းဖွင့်စ အချိန်လေးမှာ ဒီလိုပို့ စ်လေးဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆယ်တန်းကျောင်းသားလေးလို ပြန်ခံစားမိတယ် ။ ဦးထွန်းလှအောင် လို ဆရာ မျိုး ကျနော်တွေ့ ဖူးခဲ့တယ်ဗျ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ် ။
Jun 11, 2008, 10:06:00 PM
အစအဆုံး ဖတ်ကြည့်ပြီးသကာလ ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ ... အင်း ... ကောင်းပါတယ် ... ကောင်းပါတယ်။ ဘာခြုံတာလဲ ဆိုတော့ ခေါင်းမြီးခြုံတာ ဆိုပါတော့ ... ။ ခေါင်းမြီးခြုံတယ်ဆိုတော့ ဘာမှ မမြင်ရဘူးလေ ... ဒီတော့ ကောင်းတာပေါ့ ... ဟဲဟဲ နောက်တာပါ။ အတည်ပြောတော့မယ်။
အကြောင်းအရာ ... သင့်တင့်ပါတယ်။
တင်ပြပုံ ... သေသပ်ပါတယ်။
အရေးအသား အဖွဲ့အနွဲ့ပိုင်းမှာ အသေချာဖတ်ကြည့်တော့ ဟာကွက်လေးတွေ တွေ့ရတယ်။ အားမနာတနာနဲ့ ဝေဖန်လိုက်ပါရစေ ... ဆရာရေ ... ။
ပထမစာပိုဒ်မှာ ... မိုးဦးကျ မနက် ဝေလီဝေလင်းမို့ (မို့ကို သုံးရန် မသင့်တော်ဟု ယူဆပါတယ်) မို့ ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် မိုးဦးကျမနက် ဝေလီဝေလင်းမို့သာ ဒီအဖြစ်မျိုး ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်နေပါတယ်။ နောက်တခု .. တဗျောက်ဗျောက်ဖြင့် .. (ဖြင့် ကို သုံးရန်မလိုဟု ယူဆပါတယ်)
တဗျောက်ဗျောက်လို့ မသုံးဘဲ တဖြောက်ဖြောက်ဆိုရင် ပိုလှမလား တွေးကြည့်မိပါတယ်။
မိုးဦးကျ နံနက်ခင်း ဝေလီဝေလင်းမှာ သစ်ရွက်ဖျားတွေ၌ ယီးလေးခိုနေသော ရေပေါက်ငယ်လေးတွေက လေတိုက်လိုက်တိုင်း ဖွားခနဲ ဖွားခနဲ လွင့်စင်လာပြီး သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင် အိမ်ငယ်လေးရဲ့ ခေါင်မိုးကို တဖြောက်ဖြောက် ရိုက်ခတ် နေလေ၏။
ဒုတိယစာပိုဒ် ... မိုးအေးအေးနဲ့ (နဲ့ ထည့်စရာမလိုပါ) ကိုတင့် ၏ အသံသြသြ တခုက (အသံက တခု ၂ ခု မရှိပါ) ခုလို ပြင်ကြည့်တာ အဆင်ပြေမလားတော့မသိဘူး။
မိုးအေးအေးပေမယ့် အလင်းရောင်က ထင်သာမြင်သာ ရှိနေပြီမို့ ဦးထွန်းလှအောင် တယောက် အိပ်ရာထဲမှာ ဆက်မကွေးနိုင်တော့ပါ။ အိပ်ရာဘေးနားက စားပွဲတင်နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ခြောက်နာရီ ထိုးလုပြီ။ အိပ်ရာထပြီး အိမ်နောက်ရေကပြင်၌ မျက်နှာသစ်နေချိန်မှာပင် ကျောင်းစောင့် ကိုတင့်က အသံသြသြဖြင့် အိမ်ရှေ့မှ လှမ်းအော် နှုတ်ဆက်နေလေ၏။
အိပ်ရာထပြီး အိမ်နောက်ရေကပြင်၌ မျက်နှာသစ်နေချိန်မှာပင် အိမ်ရှေ့မှ လှမ်းအော် နှုတ်ဆက်လိုက်သော ကျောင်းစောင့် ကိုတင့်၏ အသံသြသြကို ကြားလိုက်ရသည်။
အတော်ပဲ ... ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ...ကိုတင့်လာပေးတဲ့ လဘက်ရည်နဲ့ အီကြာကွေး စိတ်ကူးထဲမှာ အ၀လွေးရင်း ဗိုက်လေးပြီး ငြီးငွေ့သွားလို့ ဆက်လက် ဝေဖန်မှု မပြုတော့ဘဲ ဒီမှာတင် stop လိုက်ပါတော့တယ်။
((တကယ်တမ်း ပြောမယ်ဆို အများကြီးကျန်သေးတယ်။ အားနာလို့ (ဟဲဟဲ))
Jun 13, 2008, 11:18:00 AM
ကိုစေးထူးဆီ အလည်မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ အခုရောက်လာတော့ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ပို့စ်လေးကို အရင် ဖတ်မိတယ်.. ဖတ်ရင်း အလယ်တန်းကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်လာတယ်.. ဆရာကြီးက စာသင်တာကောင်းသလို စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် လုံးဝအလျော့မပေးဘူး.. သူ က ၈ တန်း မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးတယ်။ သူ့အချိန်ဆိုရင် စာမသင်ခင် ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမ သားသမီးတွေ အရင်ဆုံးစာမေးတယ်.. ကျမကတော့ သူ့ကို ကြောက်လည်းကြောက်တော့ ဖြေရင် တလွဲချည်းပဲ.. :D
Jun 14, 2008, 9:57:00 AM